မျက်မမြင်ယုံကြည်မှု - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဘုရားကျောင်း
ဆောင်းပါး > တရားဒေသနာ > မျက်စိကန်းသောယုံကြည်မှု
ယနေ့နံနက်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏မှန်ရှေ့တွင်ရပ်။ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးတွင်အဘယ်သူသည်အလှပဆုံးဖြစ်သနည်း။ ထိုအခါကြေးမုံက“ မင်းဘေးဖယ်ထားလို့ရမလား။
ငါမင်းကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးသည် -“ မင်းမြင်တာကိုယုံသလား၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းကိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အချက်တစ်ချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြလိုသည်။ ဘုရားသခင်အသက်ရှင်သည်၊ သူတည်ရှိသည်၊ ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ဘုရားသခင်သည်သင်၏ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှီခိုခြင်းမရှိပါ။ လူအားလုံးကိုယုံကြည်ခြင်းသို့ခေါ်ယူသောအခါသူသည်အသက်ပြန်ရှင်လိမ့်မည်မဟုတ်။ သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိချင်ရင်ဘုရားလည်းဘုရားသခင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်ဇုန်နှစ်ခုတွင်နေထိုင်သည် - ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိသာသောကမ္ဘာတစ်ခုတွင်နေထိုင်ပြီးယာယီအချိန်ဇုန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းမမြင်ရသောကမ္ဘာ၊ ထာဝရနှင့်ကောင်းကင်အချိန်ဇုန်တွင်နေထိုင်ကြသည်။
သင်မှန်၌ကြည့်သောအခါသင်ဘာမြင်သနည်း သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကဖြည်းဖြည်းချင်းဆုတ်သွားသည်ကိုကြည့်ပါ sink wr in in you wr you you you wr you you or you wr you wr wr wr wr wr you wr you wr you wr you wr you wr you you you you wr wr wr wr wr wr wr wr ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်သားများ၊ သို့မဟုတ်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်း၊ မြော်လင့်ခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ပြည့်သောမျက်နှာကိုမြင်သလော။
သင်၏အပြစ်များအတွက်ယေရှုလက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံတော်မူသောအခါ၊ လူသားအားလုံး၏အပြစ်များအတွက်သူအသေခံခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု၏ပူဇော်သက္ကာအားဖြင့်သင်တို့ကိုအပြစ်ဒဏ်မှလွတ်မြောက်စေပြီးယေရှုခရစ်၌အသက်တာသစ်ကိုရရှိသည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာရှုထောင့်သစ်ဖြင့်အပြည့်အဝနေထိုင်ရန်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်တန်ခိုးဖြင့်သင်မွေးဖွားလာသည်။
«Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit» (Kolosser 3,1-4) ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌တည်နေ၏။ ငါအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှအသက်ပြန်ရှင်လာပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်၌အသစ်သောသတ္တ ၀ ါဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၌အသစ်သောသတ္တဝါဖြစ်ခြင်းဟူသည်အဘယ်နည်း။ ခရစ်တော်၌သင်တို့အသက်တာသစ်ရှိသည်။ သင်နှင့်ယေရှုသည်တစ်လုံးတည်းဖြစ်သည်။ သင်သည်နောက်တဖန်ခရစ်တော်နှင့်ကွဲကွာလိမ့်မည်မဟုတ်။ သင်၏အသက်သည်ဘုရားသခင်၌ခရစ်တော်နှင့်အတူဝှက်ထားလျက်ရှိ၏။ သင်သည်ခရစ်တော်နှင့်တလုံးတ ၀ တည်းဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ သင်၏အသက်တာသည်ယင်းတွင်ရှိ၏။ သူသည်သင်၏ဘဝဖြစ်သည်။ သငျသညျဤမွကွေီးပျေါမှာမွကွေီးတှငျနထေိုငျမသာ, ဒါပေမယ့်ကောင်းကင်ဘုံ၏နေထိုင်သူလည်း။ မင်းအဲဒီလိုထင်လား
»Darum, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf, zu danken für euch, und gedenke euer in meinem Gebet» (Epheser 1,15-17) ။
ပေါလုဘာအတွက်ဆုတောင်းနေတာလဲ အခြားအခွအေန, အနာရောဂါငြိမ်းစရာ, အလုပ်? မဟုတ်ပါ။ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောဘုန်းကြီးသောအဘခမည်းတော်သည်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုသိခြင်းအလိုငှါပညာကို၎င်း၊
«Mit ihr, seiner mächtigen Kraft, hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen» (Epheser 1,20-21) ။
ယေရှုကိုတိုင်းနိုင်ငံ၊ တန်ခိုး၊ သငျသညျယရှေု၏နာမ၌ထိုတန်ခိုးတော်၌ပါဝငျသညျ။
«Und alles hat er unter seine Füsse getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt» (Epheser 1,22-23) ။
ဒါကယုံကြည်ချက်၏အနှစ်သာရဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်ခရစ်တော်၌မည်သူဖြစ်ကြောင်းဤအသစ်သောအဖြစ်မှန်ကိုသင်မြင်သောအခါ၎င်းသည်သင်၏ထင်မြင်ပုံကိုပြောင်းလဲစေသည်။ သင်ယခုကြုံတွေ့ခံစားနေရသောဆင်းရဲဒုက္ခများကြောင့်သင်၏လက်ရှိနေထိုင်မှုအခြေအနေသည်အသစ်သောရှုထောင့်၊ ရှုထောင့်အသစ်ကိုရရှိသည်။ သင်၏အသက်တာသည်ယေရှု၏ပြည့်စုံခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်။
ကျွန်တော့်ဘဝမှာအခြေအနေတွေ၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖြိုဖျက်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ ထိုအခါငါတိတ်ဆိတ်စွာငါ့အကြိုက်ဆုံးနေရာသွား။ ငါ့ဝိညာဉ်ရေးရာဖခင်နှင့်ယေရှုစကားပြောပါ။ ကျွန်ုပ်မည်မျှလွတ်လွတ်လပ်လပ်ခံစားခဲ့ရကြောင်းနှင့်သူသည်ကျွန်ုပ်အားသူ၏ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးကြောင်းကျွန်ုပ်မည်မျှတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ကြောင်းသူ့အားရှင်းပြခဲ့သည်။
«Darum werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser äusserer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsre Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Massen gewichtige Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig» (2. ကောရိန္သု 4,16-18) ။
သူတို့သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသက်တာကိုရရှိသည်။ သူသည်သင်၏ဘဝဖြစ်သည်။ သူသည်သင်၏ ဦး ခေါင်း ဖြစ်၍ ကိုယ်တော်သည်သူ၏ဝိညာဉ်ရေးကိုယ်ခန္ဓာ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သင်၏မျက်မှောက်ခေတ်ဆင်းရဲဒုက္ခများနှင့်သင်၏လက်ရှိဘဝ၏စီးပွားရေးသည်ထာဝရကာလအတွက်ကြီးမားသောဂုဏ်အသရေကိုဖန်တီးပေးသည်။